साधारण सभा सम्पन्न -::DainikPatra
बुटवल। बुटवल–८ मा रहेको शुभ लाभ बचत तथा क्तण सहकारी संस्था लि. को १० औँ बार्षिक साधारण सभा एक कार्यक्रमका बिच सम्पन्न भएको छ ।
सहकारीका अध्यक्ष सुनिल मरािसनीकाे अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि संस्थापक शेयर सदस्य एवं सल्लाहकार अमृतलाल श्रेष्ठको रहेका थियो ।
साधारण सभामा अध्यक्षले आ.व.०७४÷०७५ को बार्षिक प्रतिवेदन तथा ०७५÷७६ को निति कार्यक्रम, कोषाध्यक्ष ज्ञान वहादुर पुनले आर्थिक प्रतिवेदन र लेखा समिति संयोजक तिलक वहादुर क्षेत्रीले प्रस्तुत गरेको लेखा प्रतिवेदन सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।
सहकारीमा ०७५ असार मसान्तसम्म २ सय ९७ जना शेयर सदस्य रहेका छन भने शेयर पुजी रु ६८ लाख ५५ हजार र निक्षेप संकलन रु २ करोड ८७ लाख ७५ हजार ३ सय ५० पुगेको छ ।
कार्यक्रममा ज्येष्ठ शेयर सदस्यहरु तेज बहादुर थापा र केशवराज बस्याललाई सम्मान गरिएको थियो । सरकारी र निजी विद्यालयबाट एसइई ०७४ मा ३ जि.पि.ए. वा सो भन्दा माथि अंक ल्याएर उत्तीर्ण शेयर सदस्यका ५ जना छोराछोरीलाई पुरस्कार एवं सम्मान गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा शेयर सदस्यका तर्फबाट रमेश बस्याल, तुल्सी मुडवरी र सल्लाहकार बाबुकाजी शाक्य लगायतले बोलेका थिए । शेयर सदस्यहरुलाई पोषण तथा खाद्य सम्बन्धि जानकारी पोषणविद् कुवेर गिरीले गरेका थिए ।
कार्यक्रमको स्वागत उपाध्यक्ष लालकाजी राजभण्डारीले गरेका थिए भने सञ्चालन सहकारीका सचिव बसन्त कुमार जोशीले गरेका थिए ।